Ndị na - emepụta ọla na - Wire Mesh Wire - China
Ngwunye nke igwe bụ ihe eji akpụ ígwè dịka otu ụzọ dị anya na obeziri ma jiri ya na ihe igwe na igwe rụọ n'etiti etiti larịị. amị mkpụrụ 25 / 3mm, 25mm / 4mm, 25mm / 5mm, 30 / 3mm, 30 / 5mm, 32 / 3mm, 32 / 5mm, 40 / 3mm ………… 75 / 5mm, 100 / 10mm emeghe 30mm x 32mm, 30mm x 60mm, 30mm x 100mm, 38mm x 100mm, 40mm x 100mm, 50mm x 50mm, 50mm x 100mm wdg elu ọgwụgwọ nwa, na-ekpo ọkụ itinye galvanized ụdị larịị mmanya, serrated mmanya, M udi mmanya ...
Metaliki gbasaa nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ihe dochie anya ihe ndị a na-eji arụ ọla, ọ na-ahụkwa ọtụtụ ihe dịka fences, ihe ịchọ mma windo, ngwaọrụ ikuku, shelves, racks, mkpuchi na ụfọdụ ebumnuche ịchọ mma. Ọkpụkpọ gbatịrị agbado na-enye ike dị elu maka oke ibu, a na-ejikwa ya echebe igwe ma ọ bụ ndị mmadụ, site na ịkwụsị otu ihe dị ka ịbanye na mpaghara ahụ. Otu ụzọ dị ka igwe anaghị agba nchara, Aluminom, Titanium, Steel, Cooper, enwere ike gbasaa niile na rhombic opend ...
Igwe eji eji mgbochi wihe 3D welded waya na-enye nchekwa mana enweghị ọdịdị mmekpa ahụ na nke na-emenye ụjọ. Ngwunye ahụ dị 50x200mm, gbadoro n'ụzọ zuru oke na ụzọ ọ bụla gafere. Oghere nke ogwe ndị ahụ dabara n'etiti etiti ọkwa. 2500mm akwara waya gbara agba di na ogwe adi; na mgbakwunye na ha nwere ike na-acha mkpuchi ke n'ọtụtụ nhọrọ nke agba. Ogologo nha iru nha Mesh panel 1.8m 2m / 2.5m 4mm / 5mm Square post 1.8m / 2m 1.5mm 60mm * 60mm Peach post 1.8m / 2m 1.2mm 50mm * 70mm70mm * 1…
Netiwo Igwe Igwe Igwe Ọdụdọ Hexagonal Production Na Igwe Ọkụ Iron Iron Low-Carbon, A na-ahụkarị rọba mkpuchi maka ndụ ogologo, Mesh ahụ na-akwụsi ike ma nwee flat n’elu. Nsu Maka Ogwe Ugbo Azu azu, ubi, umuaka ebe eji egwuru egwu. HEX.WIRE NETTING IN NORMAL TWIST (IN 5m, 10m, 25m, 30m, 100m, TO 3000m ROLL, WIDTH OF 0.5m-2.0m) MESH WIRE GAUGE…
A na-eji eriri Welded Mee Mpekere Ahịa Dị Mkpa Site na Usoro Akpaghị aka na Nrọ Egwuregwu Widing, N'ịdọ Ahịrị, Ma Nọgidesiri Ike, N'ịdabere n'akụkụ Ọ bụla. Ngwaahịa ihe njedebe bụ ọkwa ma dị larịị na-arụ ọrụ siri ike. Mesh Welded Wesh bụ nke A Na-eji Ulo Ahịa na Ugbo, Buildinglọ, ationgbọ njem na Ngwuputa maka ebumnuche ndị a niile dị ka ụlọ ọkụkọ, nkata, akwa, Runway, mkpọchi mmiri, ihu mmiri, mkpụrụ osisi. Maka mmecha, anyi n’enye gi…
A na-emepụta olulu ebe a na-ahụ maka elu na ụdị dị iche iche nke nwere oghere sara mbara na-amalite site na obere oghere na ala whch na-enyere aka gbochie ịbanye na obere ụmụ anụmanụ. Ala ọ bụla, a na-eji ihe ndozi ubi anyị mee ọtụtụ ihe iji mee ka ịnabata ịnyịnya, ehi, hog na anụmanụ ndị ọzọ buru ibu. Ngwa: O di nkpa inye nri azuma aturu.
A na-eji Gabion mee ihe ntanetị okpukpu abụọ hexagonal. Iji jupụta na nkume dị n’akụkụ osimiri ma ọ bụ nke osimiri iji gbochie iju mmiri ahụ, n’elu ugwu ahụ gbochiri nkume ịda. 1.Gabion ihe eji eme ihe: waya di ocha galvanized waya na Galfan kpuchie 2. Gabion mesh: 2.0mm, 2.2mm, 2.7mm, 3.0mm, 3. Gabion selvage wire: 2.4mm, 2.7mm, 3.4mm, 3.9mm 4 Gabion nze mpekere: 6 * 8cm, 8 * 10cm, 10 * 12cm, 12 * 15cm 5. Gabion lacing waya: 2.2mm, 5% nke gabion nauyi 6. Gabion Zinc mkpuchi: 225-275g / m2 dị ka EN 10224-2 7 ….